भारत यू–१९ विश्वकप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा प्रवेश | Nagarik News - Nepal Republic Media
भारत यू–१९ विश्वकप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा प्रवेश
न्यूजिल्याण्ड – भारतको यू १९ क्रिकेट टोली १९ बर्षमुनिको विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
न्यूजिल्याण्डमा जारी प्रतियोगिताअन्तर्गत शुक्रबार सम्पन्न खेलमा बंगलादेशको यू १९ टोलीलाई १ सय ३१ रनको फराकिलो अन्तरमा पराजित गर्दै भारतको यू १९ टोलीले सेमिफाइनलमा पाकिस्तानसँगको भेट पक्का गरेको छ।
टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको भारतले ४९.२ ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै २ सय ६५ रन बनाएको थियो । भारतका लागि सर्वाधिक रन शुभम गिलले बनाएका थिए । गिलले ९४ बलमा ९ चौकाको मद्दतमा ८६ रनको योगदान गरे। त्यस्तै अभिशेक शर्माले ४९ बलमा ५०, कप्तान पृथ्वी शले ५४ बलमा ४० र एचएम देसाईले ४८ बलमा ३४ रन बनाए।
भारतलाई २ सय ६५ रनमा समेटन बंगलादेशका क्वाजी ओनीकले ३, नयीम हसन र सइफ हसनले २–२ तथा रोबिउल हक र हसन महमदले १–१ विकेट लिए।
भारतले प्रस्तुत गरेको २ सय ६६ रनको लक्ष्य पछ्याएको बंगलादेश ४२.१ ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै १ सय ३४ रनमै समेटिएपछि भारतले फराकिलो जित निकालेको हो।
बंगलादेशका लागि पिनाक घोषले सर्वाघिक ४३ रन बनाए। त्यस्तै अफिफ हसनले १८, रोबिउल हकले १४, मोहमद नइम र कप्तान सइफ हसनले १२/१२ रन बनाए।
बंगलादेशलाई सस्तैमा समेट्न भारतका कमल नगरकोटीले ३, अभिशेक शर्मा र शिभम मावीले २–२ तथा अनुकुल रोयले १ विकेट हात पारे।
अब भारतले सेमिफाइनलमा पाकिस्तानसँग खेल्नेछ। पाकिस्तानले दक्षिण अफ्रिकालाई हराउँदै सेमिफाइनलमा स्थान सुरक्षित गरिसकेको छ।
प्रकाशित: १२ माघ २०७४ १५:१२ शुक्रबार
प्रदेश ५ : पहाडमा पहिरो, तराईमा बाढीको त्रास
अविरल वर्षाका कारण प्रदेश न. ५ मा बाढी पहिरोले वितण्डा मच्चाउन शुरु गरेको छ। प्रदेशका पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र तराईमा डुबान शुरु भएको हो। बिहीबार रातीदेखि परेको अविरल वर्षाले मानवीय क्षतीका साथै केहि घरमा क्षती गरेको छ।
विपन्नलाई सरकारी लगानीमा चिटिक्क घर, तर घामपानी छेकेन
दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकामा विपन्नका लागि सरकारी लगानीमा बनाइएका प्रिफ्याब घरमा कोही जान मानेनन् । अस्वाभाविक निर्माण लागतमा बनेका ती घरले घाम र पानी पनि राम्ररी छेक्दैनन् ।
शुक्रबार ११८ जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए, १२० जना डिस्चार्ज भए
शुक्रबार नेपालमा १ सय १८ जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार देशका विभिन्न २५ वटा प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा १ सय १८ जना संक्रमित थपिएका हुन् ।
उपत्यकामा शुक्रबार एकै दिन थप ४२ मा कोरोना संक्रमण पुष्टि
काठमाडौं उपत्यकामा शुक्रबार थप ४२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा थप ४२ जना कोरोना संक्रमित थपिएको पुष्टि गरेका हुन् ।